American Congressman: Mining inyorwe - Blockchain News
Kukadzi 17, 2018 arun
American Congressman: Mining inyorwe
Mumiririri Democratic Party of United States Ro Khanna proposes kumanikidza mutero pamusoro remigodhi cryptocurrencies.
Mumiririri Democratic Party of United States Ro Khanna anotenda kuti remigodhi cryptocurrencies anofanira kunonyorwa. Sezvo kuchera mune ramangwana pave zvimwe zvinetso zvemhoteredzo, Congressman proposes kudzikamisa kukuvadza ichi.
Kana kabhoni choutsi vari kunonyorwa, Saka wadii kuita zvakafanana mugodhi cryptocurrencies? Mining bitcoin nezvimwe cryptocurrencies inoda zvinokosha simba mari. Zviremera munyika dzakawanda Wakatotanga kunetseka pamusoro kuwedzera uwandu magetsi kuparadzwa, uye vanoona vari vachifanotaura zvakakomba dambudziko. Hezvi American Congressman anofunga nezvazvo:
A mutero anogona kunzi musi kushandiswa kugona, kana mutero pamusoro nokushanda mapurazi kubudisa BitCoins – sezvo ivo chokuita zvakatipoteredza, ivo anofanira kuripa.
Kazhinji, Congressman vanyatsowana kudzora pamusoro zvose zvinoumba cryptocurrency kutengeserana, kusanganisira nokuti rinoita pakurwisa kubiridzira. Khanna zvakare anotenda kuti cryptocurrency kwema vanokosha kuongorora, kuti kurwisa ugandanga.
Previous Post:White House mukuru: kwete pedyo Bitcoin mutemo
Next Post:Chii chinozoitika nokuda Bitcoin Price?
خدمات تخصصی نصب و جابجایی کولر گازی anoti:
Kukadzi 18, 2018 pa 8:12 AM
Kukadzi 27, 2018 pa 3:51 AM